Doorashada waxaa saameeyn ballaaran ku yeelan doona Sociala medier - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Gabar hor fadhida oo xiriir ku sameeynaysa kombiyuutarkeeda. sawir: Hasse Holmberg
Doorashada waxaa saameeyn ballaaran ku yeelan doona Sociala medier
Sociala Medier kaalin wayn ayuu ku yeelan doonaa doorashada
La daabacay fredag 24 januari 2014 kl 13.37
Maalmihii ugu dambeeyey ayey dadyoow gaareya 4 000 oo ruux qoraallo twitter ee aaladda internet-ka ey doodi uga socotey la xiriirtay xaaladda iskuullada dalka, iyadoona ay dooddaa iminka ku soo biireen xisbiyada kala duwan ee siyaasadda dalka ku hardamaya. Dhacdada qoraalladan twitter-ka oo loogu magac-darey hashtag-ga Björklundskola - dugsiga Björklund, oo loola jeedo wasiirka tacliinta ee Jan Bjöeklund, ahna hogaamiyaha xisbiga Shacabka.
Sheekadani oo ka bilaabatay kolkii ay Aisha oo ka gaabsatay in aannu magaceeda sheegno oo ka mid ah ardeyda dugsiyada sare ee magaalada Istockholm ay qoraal ku daabacady barta twitter-ka iyada oo isu diyaarineeysa imtixaan:
- Su'aal caadi ah un baan soo bandhigay. Waxaan weeydiiyay sida ey wax-barashada u arkaan ama u dareemaan. Jawaabo badan kolkii aan helay ayaan go'aansanney inaan hashtag ka dhigno si ey waalidiinta ugu suurtagsho iney qeyb ka qaataan, maadaama ay waalidiin badani hadal hayaan xaaladda iskuullada. Hase yeeshee maaheyn muhiimadda laga lahaa in dhanka siyaasadda iskuullada laga hadlo, sida ay sheegtay Aisha.
Magaca Björklunmd looma dooran sidii in lagu bannaan-baxayo siyaasaddiisa iskuulka oo kale. Laakiinse waa isaga shakhsiga masuulka ka ah tacliinta ee abuuray nidaamka iminka lagu howl-galo, sida ay sheegtay gabar aannu ugu magac darney Aisha dhigatana fasalka saddexaad dugsiga sare, ahaydna ruuxuu ka dambeeyay doodda twitter-ka iskuulka oo u ballaartay si aanay fileeyn.
Qaar ka mid ah ardeyda qoraallada doodda hashtag-ga #björklundskola ka qeybta qaadatay ayaa qoray in loo arko in ardeydu yihiin waxashiin, caajislowyaal aan dooneyn iney dadaal muujiyaan. Iyo in midda keliya oo aan ka bartay hashtag-ga #björklundskola ay tahay inaanan waxba ku aadin ama aanan ku wanaag-sanayn si kasta oo aan isugu dayo. Arrimmahaasina oo calool xanuun iyo walaac igu haya maalin walba. Mana ahan wax aan qaadi karo.
Kolkii ay dooddan bilaabaty ayay maalintii labaad ey xubnaha xisbiga Sooshiyaaldimoqoraadiga ee magaalada Istockholm ey boggooda internet-ka ku daabaceen doodda. Halka dhanka kale uu hoggaamiyaha xisbiga Bidixdana Jonas Sjöstedt uu twitter-ka qoraal ka geeystay. Iyada oo wixii intaa ka dambeeyay lagu daabacay qoraallo badan oo siyaasadda iskuullada la xiriira kuwo difaacaya nidaamka iminka jira iyo qaar ka soo hor-jeeda intaba.
Brit Stakston ahna hoowlwadeennad ka howl-gasha shirkadda is-gaarsiinta JMW ayaa sheegtay inay saadaalineeyso in doorashada sannadka ay saameyn ballaaran ku yeelan doonaan habka lagu magacaabo Sociala Media (war-baahinnada kala duwan ee bulshada oo dadka qaarkii ku magacaabeen deriska aan is aqoon)
- Falkan wuxuu tusaale fiican u noqon karaa waxyaabaha mustaqbalka dhici doona (Waa inta lagu jiro xilliga doorashooyinka). Shakhsi xiriir la lahaa 50 ruux kolkii falkan uu biloowday. Shkahsiyaad aan sidaa u badneyn oo ka doodayey nolol-maalmeedkooda ey dooddoodii si sahlan ku gaartey siyaasiyiinta ey go'aannadu ka go'aan, sida ay sheegtay Brit Stakston.